WWE 2K inotengeswa kwenguva shoma | IPhone nhau
Nuvamete isu tinodzoka kuzotaura nezve chimwe chishandiso chinowanikwa kurodha pasi nekuderera kukuru mumutengo waro. Tiri kutaura nezve WWE 2K application, iyo Iine mutengo wenguva dzose we7,99 euros, asi kwenguva yakati wandei tinogona kuiwana chete ma0,99 euros. WWE 2K ndiyo chaiyo yeWWE ine rezinesi mutambo wepamhepo, uye ichatibvumidza kuti tinakidzwe zvizere mutsimba.
WWE 2K inotsigirwa chete neiyo iPad Air 2, iPad Mhepo, iPad Mini 3, iPad Mini 2, iPad 4, iPad 3, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 6 uye iPhone 6 Plus, saka kana iwe usina chero eaya madhizaini, zvinosuwisa kuti iwe haugone kushandisa inoyevedza mutsimba mutambo,
1 WWE 2K Zvimiro
2 WWE 2K mutambo ruzivo
WWE 2K Zvimiro
Yechokwadi WWE chiito, Superstar zvinyorwa, mutsimba mafambiro, ako aunofarira machisi mhando uye zvimwe zvakawanda.
Gadzira Superstar - Gadzira iyo Superstar yawagara uchida kuve. Inowanikwa yemhando dzese dzemutambo.
Career Mode - Sarudza DIY Superstar kana WWE Superstar uye muperekedze parwendo rwake kuburikidza neWWE. Tora ruremekedzo, uvandudze hunyanzvi hwako, kuhwina mazita, uye kuzadzisa zvinangwa kuti uite nzira yako kuenda kuWWE Hall yeMukurumbira.
Kurovedza: Dzidza kutamba WWE 2K kubva kune anotanga kuenda kune pro uye uwane ese ins nekubuda kwemutambo mune iyo dzidziso.
Yechokwadi-nguva yakawanda mitambo inowirirana: batanidza neyako yakasikwa Superstar kana yako yaunofarira WWE Superstar uye tora shamwari kana iyo WWE Universe.
Mazhinji asingabvumike - Tamba uye vhura matani ezvinhu kuti ugadzirise Superstar yako.
WWE 2K mutambo ruzivo
Kugadziriswa kwekupedzisira: 16-06-2015
Inoda zvirinani iOS 7 kana gare gare uye inowirirana neiyo iPhone, iPad uye iPod Touch, mune mamodheru andakatsanangura pakutanga kwechinyorwa chino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » WWE 2K iri kutengeswa kwenguva shoma